Sun, Jun 24, 2018 | 01:26:09 NST
11:35 AM ( 10 months ago )
सुजाता खत्री -
‘ए आम्मा, यहाँ सर्प रैछ !’ आमा आत्तिदै चिच्याउनुभयो ।
म दगुरेर आमा नजिकै पुगेँ ।
एउटा हातमा पानी तान्ने पम्प र अर्को हातमा चियाको गिलास समातेकी आमा फ्या फ्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो । सर्प देख्दा आत्तिएर होला चिया पनि पोख्नुभएछ ।
‘कहाँ निर हो ?’ मैले सोधेँ ।
फूलदानी देखाउँदै आमाले भन्नुभयो ‘त्यहाँ छ ।’
फलामको पाताको दुई तह भएको र्‍याकमा धेरै जसो तल्लोमा जुत्ता र माथिल्लोमा फूलदानी अनि पानी तान्ने पम्प हुन्छ । त्यो र्‍याक अघिल्लो दिन मात्र स्टोर रुममा पुगेको हो । र्‍याकको बायाँपट्टी पानी भरिएका जार, जर्किन, बाल्टिन र प्लास्टिकका बोतल छन् । दायाँपट्टी छरिएका आलु, भाँडाकुडाँ । आमाले फुलदानीमा संकेत गर्ने बित्तिकै हेरेँ, पुच्छर देखियो । र्‍याकलाई घ्वार्र ताने तर सर्प र्‍याकमुनि रहेनछ ।
हामी कराएको सुनेर बुवा र दिदी पनि कोठामा नै आइपुग्नुभयो ।
‘सर्प झ्यालबाट निस्केको राम्रो, झ्याल खोलिदेउ,’ बुवाको बोलि फुट्यो ।
‘झ्याल खोल्ने कसरी, सर्पले टोक्यो भने’ दिदी आत्तिनुभयो ।
सर्प कुनामा गुजुल्टिएर बसेको देखियो, हामी के गर्ने अन्योलमा परिरह्यौ ।
‘यो बानले कति दुःख देको होला ? हिजै भेट्न पाको भए आनन्द हुन्थ्यो, अब के गर्ने होला छि !’ आमाले बोल्नुभयो ।
अघिल्लो दिन क्याम्पसबाट घर फर्कदा १२ बजिसकेछ । घाम चरक्क नलागेपनि हप्प गर्मी थियो, ज्यान पसिनाले लपक्कै भिजेको भएर नुहाएर मात्र खाना खाने निधो गरे । नुहाइसके र कपडा पखाल्न थाले । पाइन्ट पखाल्दै गर्दा धाराले ख्वाक ख्वाक गर्‍यो, मैले बुझे माथि ट्याङ्कीमा पानी सकिएछ । पानी माथि पठाउन स्वीच अन गरेर म कोठामा पसे । साढे दुई बजेको थियो होला, छतबाट पानी खसेर टिनमा ट्वार्र गरर्‍यो ।
‘लौजा ! पानीको स्वीच बन्द गर्नुपर्ने’ हातको मोबाइल खाटमै छोडेर बाहिर निस्के र स्वीच अफ गरे ।
कति पानी पोखिएछ भनेर कौसीमा हेर्दा पानी धेरै जमेको देखेपछि लाग्यो आज तलको ट्याङकीमा जम्मा भएको पानी सबै सक्कियो ।
दोडिएर तल आए, ट्याङकीको ढक्कन खोलेको मात्र के थिए पानी भन्दा पहिला सर्प देखियो, पाइपबाट तल जाँदै रहेछ, ढक्कन खोलेपछि माथितिर फर्कियो, मेरो हात र सर्प दुरी अब धेरै छैन, मेरो सातो उड्यो । हातका रौं ठाडा भए ।
‘घरमा कोहि छैन, सर्पले मलाई टोक्यो भने... !’ मेरो मनमा कुरा खेल्न थाल्यो ।
‘सर्प विषालु रैछ भने आज पक्का म गएँ ।’ केहि दिन अगाडिमात्र सर्पदशंको बारेमा डाक्टर शेरबहादुर पुनसँग अन्तरवार्ता गरेको थिए । त्यहाँ डाक्टरले भन्नुभएको प्राथमिक उपचारका विधि दिमागमा दौडन थाले ।
तर सर्पलाई नि डर लागेछ सायद, छिटो छिटो गयो, भर्‍याङ मुनी अध्यारो भएकोले मैले कहाँ गयो देख्न सकिन । कोठाबाट मोबाइल ल्याएर टर्च बालेर हेरे, भर्‍याङ मुनी राखिएका सामान एकएक गरी लामो लठ्ठीले तान्न थाले, सर्प बेरेर राखेको पाइपमा रहेछ चलाएपछि भित्तो उक्लन थाल्यो र प्वालमा छिर्यो । बाहिर गएर प्वाल छ कि छैन हेर्न गए तर देखिन । अब अर्को पीर थपियो, घरमा कसैलाई सर्प छ भन्ने थाहा छैन, टोक्यो भने ?
बुवा र भिनाजु घरमा आइपुग्नुभयो, एकै छिनमा दिदी पनि । मेरो कुरा सुनेपछि सबैले प्वालमा हेर्न थाल्नुभयो । सर्प बाहिर निस्केको रहेछ, हामीले टर्च बालेपछि फेरि फर्कियो प्वालमै ।
अब बुबा सर्प गोठालो हुनुभयो, दिदीले घरका अरु ठाउँमा भएका प्वाल टाल्न थाल्नुभयो । पानी ट्याङ्की सँगै भएको जुत्ता राख्ने र्‍याक स्टोर रुममा पुग्यो । भूइँ तलामा ५ वटा ढोका छन्, ट्वाइलेटको, दुईवटा सामान राख्ने कोठाको, म बस्ने कोठाको र मुल ढोका । सबै ढोकामा सर्प छिर्ने प्वाल टालेपछि बुवाले सर्प भगाउन बास्ना आउने धुम बाल्नुभयो । उहाँसँग अर्को जुत्ति रहेछ, महको रेखी हाल्ने । लठ्ठीमा महले भिजेको कपडा बेरेर सर्पलाई लक्ष्मणरेखा लागाईयो, अब सर्पले जाने बाटो भनेको मूल ढोकामात्र थियो । सबैलाई ढुक्क भयो अब सर्प माथितलामा आउँदैन ।
रातको खाना खाइसकेपछि दिदीले माथिल्लो तल्लामा सुत भन्नुुभयो, मैले मानिन । सोचेँ सर्प घरबाट निस्किसक्यो होला । तै पनि मनको शान्तिको लागि सर्प छिरेको प्वालमा हेरेँ र कोठामा चुकुल लगाएर सुतेँ । हिजोअस्ति देखेका भन्दा आज भिन्दै सपना देखेँ, सर्प सिरानीमा आएको, सिरकमाथि बसेको, मुख पुछ्ने रुमालमा झुन्डिएको आदि । प्राय एकै पटक बिहानमात्र खुल्ने आँखा ६ पल्ट भन्दा बढि खुले, कहिले बिहान होला जस्तो लाग्यो ।
साढे ८ बजिसक्यो, सर्प हलचल गर्दैन, आँधो पो हो कि भन्ने अड्कल आमाको छ । सर्पको रंग घस्रने भाग पहेलो र माथिको भाग कालो, हरियो मिसिएको थियो । खाली ठाउँ पायो भने बाटो लाग्छ होला भन्ने लागेर गुजुल्टिएको ठाउँ अगाडि खाली गरिदियौँ । मलाई छिमेकीले मुसा आउँने बाटोमा धोक्रो थापेर मुसलाई पक्रेको याद आयो र सर्पलाई खुलाइदिएको बाटोमा मैले धोक्रोको मुख खोलेर राखिदिए । सर्प हामीले भनेको माने झैँ गरी धोक्रामा छिर्‍यो । सर्पको मुखले धोक्रो पिँध भेट्यो भने त पक्का फर्कन्छ, त्यसैले डरैडरमा आधा सर्प धोक्रामा छिर्ने बित्तिकै उठाए र धोक्रोको मुख बानेँ ।
अब झन् ठूलो हल्ला भयो सर्पलाई के गर्ने । दिदीले बाहिर लगेर छोड भन्नुभयो, बुवाले मान्नुभएन । हाम्रो घर भन्दा दायाँबायाँ साना बच्चाहरु खेलिरहेका हुन्छन्, त्यसैले सर्पलाई खोलामा नै पुर्‍याउने निर्णय भयो । म धोक्रो समातेर अघि लागे, मेरो पछाडि हातमा लौरो लिदैँ बुवा र त्योभन्दा पछाडि पल्लाघरका स–साना नानीहरु । हामी एक हुल लाइनबद्ध भएर सर्प फाल्न गयाँै, वल्लोपल्लो घरकाले हामीलाई के भयो भनेर ट्वाल्ल हेर्दै थिए ।
म उभिएको बारीको डिलबाट तीन पाटा कटेपछि मात्र खोला आउथ्यो, सर्पलाई मात्रै फाल्दा खोलामा नपुग्ने भएपछि बोरामा ढुंगा बेरेर हुत्याए । बुवा हामीले निकालेको जात्राको बेलिविस्तार लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो, म घर फर्किए । सर्प खोलामा पुग्यो पुगेन थाहा छैन, तर घरका सबैको मनको डर भने सर्पको बोरासँगै गयो । आमाले धोक्रो नल्याको भनेर सोध्दा म टाउको हल्लाउँदै कोठामा पसेँ ।